Ngosi News |
Ihe ngosi Canton 2016
site ha na 16-10-21
On October 15th, na 120th nnọkọ nke Canton Fair meghere ya ákwà mgbochi na Guangzhou Pazhou Exhibition Hall. A kpọrọ Grace ka ọ mee ọmarịcha ngosi na ngosi a. Tọrọ ntọala na oge opupu ihe ubi nke 1957, China Import na Export Commodities Fair (Canton Fair) ẹkenịmde ke Guangzhou na mmiri ...
site ha na 16-10-11
Site na Septemba 28, 2016 ruo Ọktọba 1st, akpọrọ Grace ka ọ sonye na 16th Vietnam International Rubber Industry Exhibition nke emere na Saigon Exhibition & Conference Center. Vietnam International Rubber Industry Ngosi bụ mba ígwè ụlọ ọrụ ngosi na ike internati ...
site ha na 16-10-10
Septemba 26, 2016 ruo 30, nke iteghete China Columbia International Plastics Exhibition COLOMBIAPLAST 2016 emere nke ọma na Bogota International Convention and Exhibition Center. Dị ka pụrụ iche otu nke Columbia kasị ukwuu na kasị ochie ulo oru ngosi, ọ na-ọma hel ...
site ha na 16-09-21
China International Equipment Manufacturing Exposition (nke a na-akpọ CIEME) bụ nkwupụta ngosipụta akụrụngwa kachasị nke mba. CIEME, ya na isiokwu nke “nrụpụta akụrụngwa yana teknụzụ dị elu & ọhụụ” ”enweela ihe ịga nke ọma maka nnọkọ 14 kemgbe 20 ...
K Gosi 2016
site ha na 16-08-11
Site na October 19, 2016 ruo 26th, a ga-eme ihe ngosi ụlọ ọrụ plastik kachasị n'ụwa (K Show 2016) na Dusseldorf, Germany. Site na mgbe ahụ, Grace ga-egosipụta igwe kachasị ọhụrụ na K Show. Anyị ji obi anyị niile na-akpọ gị ka ị bịa n'ụlọ ntu anyị - Dusseldorf International Exhibition Hall ...
site ha na 16-01-21
Ná mmalite nke afọ a, Grace gara nnukwu ihe ngosi kachasị nwee mmetụta nke ụlọ ọrụ plastik na mpaghara ọwụwa anyanwụ na mpaghara ugwu Africa - Plastex. N'oge ngosi ahụ, Grace gosipụtara ọgbọ ọhụrụ conical ejima ịghasa extruder nwere "ọdịnaya ọgbara ọhụrụ na ọkwa", t ...
site ha na 15-09-21
Na Sept. 2015, mgbe ọtụtụ nyocha nyocha saịtị na ngalaba metụtara obodo ahụ, gọọmentị obodo Zhangjiagang họpụtara Grace ka ọ bụrụ naanị igwe igwe akpọrọ akpọrọ n'etiti ụlọ ọrụ 340 nke obodo anyị, na-esonye na China Top Grand International Equipment Exposition! N'oge ekpughere ...
site ha na 15-06-21
GRACE Machinery gara FEIPLAST nke ọma site na ụbọchị 4 ruo 8 nke Mee, 2015 Na afọ ole na ole na mmepe na South America, Nzuzo 50㎡ anyị chịkọtara ọtụtụ ndị ahịa ochie ma dọta ọtụtụ ndị ahịa ọhụrụ. Karịsịa PVC anwụrụ, profaịlụ na ụlọ tile extrusion na-ukwuu enen. GRACE enwetawo ...
site ha na 15-06-11
CHINAPLAS 2015 emechaala nke ọma na Guangzhou na Mee 23! Mgbe o kwusịrị nlezianya maka ihe ngosi ahụ, Grace gosipụtara nke ọma isi ihe ise: GM60 / 38 dị elu nke na-emegharị otu ihe, SJZ80 / 156 na-arụ ọrụ nke ọma ejima ejiri na-arụ ọrụ, 160 ụdị igwe anaghị agba nchara ...